🥇 ▷ Kuwani waa weeraradan cusub ee laga heli doono Pokémon Sword & amp; Gaashaanka ✅
Weli waxaa jira dhowr bilood ilaa jiilka siddeedaad Pokémon yimaado laakiin waxaan horey u helnay macluumaad qaar, gaar ahaan qaar ka mid ah weerarada cusub ee gaari doona wareegtada. Sidii la filaayay, weeraradan cusub waxay iska leeyihiin xayawaanada jiilka cusub, in kasta oo aan meesha laga saarin in oday jir ah lagu cusbooneysiinayo wax cusub.
Weeraradan waxaa iska leh Morpeko, Grookey, Daraludon iyo Obstagoon, kan dambe wuxuu umuuqdaa inuu yahay isbedelkii ugu dambeeyay ee Zigzagoon, jiilkii saddexaad ee Pokémon kaasoo asal ahaan aan muhiim ka aheyn adduunka tartankan, ilaa iyo hada. Imaatinka isbeddelka seddexaad wuxuu curyaamikaraa maansada Pokémon, in kasta oo tani ay tahay mid weli la arki karo.
Afar dhaqdhaqaaq oo cusub
Morpeko waa Pokémon oo had iyo jeer isku beddeli doona inta u dhexeysa nooc mugdi iyo mid fudud, macno ahaan. Midka hore wuxuu noqon doonaa xoogaa nooc xun ah iyo midka labaad oo ah nooca korantada, weerarka ay u keento cayaarahan wuxuu noqon doonaa “Aura Wheel” kaas oo kaliya la ogyahay taas, iyadoo kuxiranta qaabka Pokémon, waxay yeelan doontaa saameyn kala duwan.
Weerarka Grookey, oo ah nooca warshad-hore ee Pokémon, aad ayuu uga sii toos badan yahay, “Laanta Poke” waa weerar jir ahaaneed kaas oo kasoo horjeedka Pokémon uu ku garaaco laan uu Grookey laftiisu sido. Waa weerar noocee ah oo laga yaabo inuu yahay mid ka mid ah weeraradii ugu horreeyay ee aan ku arki doonno ciyaarta, haddii aan u doorano Grookey mid bilow ah.
Waxaan horey kuugu sheegnay weerarka xigga, kani waa “Exhaustive Beam”, waa weerar uu sameeyay taageere Pokémon kaasoo ka qeybgalay tartan loogu jiray joornaalka Jaban ee CoroCoro. Daraludon, nooca birta ah, ayaa noqon doonta Pokémon kaas oo awood u yeelan doona inuu adeegsado weerarkan oo waxyeello badan geysan kara laakiin taasi wuxuu qeyb ka yareyn doonaa nolosha Daraludon.
Ugu dambayntiina, Obstagoon wuxuu adeegsan doonaa “Xanibaadda”, oo ah weerar wasakhayn doona kooxda ka soo horjeedda. Annagu garan mayno inuu kani noqon doono xaalad cusub oo la mid ah sunta ama inay tahay uun weerar kale oo jidheed. Obstagoon wuxuu ka yimid khadka toosan ee Zigzagoon, oo ah abuur caadi ah, laakiin nooca abuurkiisa wali lama shaacin, in kasta oo naqshadeynta aan ku garan karno inay noqon doonto nooca ugu xun.
Kuwani waa weerarada aan ognahay illaa iyo hadda, waxaan taxadar u yeelan doonnaa xayeysiiska Game Freak si aan wax uga baranno abuurista cusub iyo weeraradooda. Seefta & gaashaanka Pokémon waxay imaan doontaa Noofembar 15 ilaa Nintendo Switch.